जनकपुरधाम, पुस २४ गते । श्रम स्वीकृतिका लागि सहज हुने उद्देश्यले जनकपुरमै श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएको दुई साता नवित्दै सेवाग्राहीहरुले सास्ती पाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सहज रुपमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी
कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रचण्डले पदको दुरूपयोग गरे,डा. केसीको आरोप
पुस २३ गत्ते , काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि आन्दोलनरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सरकारले विगतमा गरेको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरे बुधवरदेखि अनशन शुरु गर्ने बताएका छन् । सोमवार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार
पुस २३ गत्ते , काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई विशेष संरक्षण गर्दै औषधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको औषधि परामर्श परिषद्को १५ औँ बैठकमा औषधिको मूल्य
वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमिततामा मेरो संलग्नता छैनःमन्त्री अधिकारी
पुस २३ गत्ते , काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबारमा सोमबार बिहान आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले
बाइडबडी जहाज प्रकरणःउपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित
पुस २३ गत्ते , काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै पारित गरेको हो। नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी अनियमिततामा उपसमितिले
जनकपुरबाट ५ हुण्डी कारोबारी पक्राउ, मुख्य कारोबारी फरार
जनकपुरधाम, पुस २२ गत्ते । काठमाडौं–प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट खटिएको टोलीले ८३ लाख ६२ हजार र ६ हजार ६ सय भारतिय रुपैयाँसहित ५ जना हुण्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका– ११ स्थित किशोरीनगरमा रहेको रामेश्वर शाहको घरमा अवैध कारोबार हुने
सरकारलाई बचाउ गर्न माधव नेपालको आह्वान
जनकपुरधाम, पुष २२ गते । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विरोधीहरु सरकारको दुष्प्रचार गर्न लागेको भन्दै नेता कार्यकर्ताहरुलाई दृढताकासाथ सरकारलाई बचाउ गर्न आह्वान गरेका छन् । वर्तमान सरकारको लोकप्रियता देख्न नसकेकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसमा हतास र निरासाको प्रवृति बढेको भन्दै
फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ११ बुंदे स्मरणपत्र
काठमाडौं, पुस २१ गते । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ बुंदे स्मरणपत्र बुझाएको छ । उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीय फोरमले स्मरण गराएको हो । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित फोरमका नेताहरुले आज
जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश २ को निर्वाचन हुँदै
कमलेश ठाकुर जनकपुरधाम, पुस २१ गते । नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश २ का आगामी नेतृत्वका लागि निर्वाचन सुरु भएको छ । संघमा प्रगतिशील समूह, पेशागत समूह र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । दुई सय पचास मतदाता रहेको प्रदेश २ को निर्वाचनमा अध्यक्षका
योगीको सम्मानमा प्रदेश सरकारको ७३ लाख खर्च
पौष २१ गत्ते,जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सरकारले रामजानकी विवाह महोत्सवमा जन्तीको स्वागतमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । विवाह महोत्सवमा जन्ती आएका भारत उतर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथको लागि आयोजना गरेको भण्डार र सम्मनमा ७३ लाख ८ हजार १ सय ४५
जनकपुरधाम, पुष २० गते । सुनसरीको इनरुवामा शनिवारदेखि आयोजना हुने प्रथम मनमोहन स्मृति राष्ट्रिय एकदिवसिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रदेश २ का खेलाडीहरु खेलकालागि प्रस्थान गरेका छन् । मेहबुब आलमको कप्तानीमा १६ सदस्यीय टोली शुक्रवार इनर्वाका लागि प्रस्थान गरेका हुन् ।
पुस २० गत्ते ,काठमाडौँ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहको प्रारम्भिक वर्गीकरण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका आधारमा चार वर्गमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार
जनकपुरधाम, पुस २० गते । प्रदेश २ सरकारले लोकसेवा विधेयक अगाडि बढाएको छ । संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी नदिँदा सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले लोकसेवा विधेयक ल्याएर स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको तयारी थालेको हो । प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा
नेकपामा सांसद किसोरीले घर भाडा फिर्ता गरे
जनकपुरधाम, पुस २० गते । नेकपाका प्रदेश सांसद किशोरी साह कमलले घर भाडाबापत लिएको रकम फिर्ता गर्ने भएका छन्। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरमा घर हुँदाहुँदै सरकारबाट घरभाडा बापतको रकम लिँदै आएका उनले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो खातामा आवास सुविधाबापत अहिलेसमम
जनकी मेडिकल कलेजमा रयागिङ्ग गर्ने डाक्टर थुनिए
कमलेश ठाकुर जनकपुरधाम, पुस २० गते । जनकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुलाई र्यागिङ्ग गर्ने डा. राकेश पाण्डे पक्राउ परेको छ । पाण्डेले रातीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी विद्यार्थीहरुलाई गाली गलौज र केटीहरुलाई जिस्काउने जस्तो अभद्र व्यवहार विद्यार्थीहरुसंग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ
२०७६ को क्यालेण्डरमा १३ दिन सार्वजनिक बिदा थप्न प्रस्ताव
पुस १८ गते । काठमाडौं ( सार्वजनिक बिदा बढी भयो भनेर २०७५ मा कटौती भएका बिदाहरु २०७६ मा फेरि थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। गएको चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले सरकारी कामकाज नै प्रभावित भएको भन्दै २०७५ को क्यालेण्डरमा बिदा
२ सय ३५ किलो चरेससहित दुईजना प्रहरीको फन्दामा
धादिङ, पुस १९ गते । भारतीय कन्टेनरमा लुकाई छिपाई लैजान लागेको २ सय ३५ किलो चरेससहित दुईजनालाई प्रहरीले गजुरीबाट पक्राउ गरेको छ । विशेष सुराकीका आधारमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो सहितको टोलीले काठमाडौंबाट फर्कँदै गरेको एचआर ३८ एस ९३७१ नम्बरको भारतीय कन्टेनरमा क्याबिन
निर्वा्चित भएको एक वर्षपछि सांसद्को सपथ
काठमाडौं, पुस १९ गते । रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वा्चित भएको एक वर्षपछि सांसद् पदको सपथ ग्रहण गर्दैछन् । डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्षका लागि राखिएका चौधरी सपथपछि संसद भवन जालान् कि फेरि जेलमै ? यो चासो सर्वत्र छ । आज पद तथा गोपनीयताको
आन्तरिक सुरक्षा विधेयकले ‘संघ–प्रदेश द्वन्द्व’
जनकपुरधाम –संघीय सरकारले ल्याउन लागेको आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चिन्ता जनाएका छन् । उनले पाएको जानकारीअनुसार विधेयक मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा
एउटै नम्बरप्लेटका तीन गाडी, कार्यालय प्रमुख बेखबर
बारा, पुस १९ गते । एउटै नम्बरप्लेटका तीन गाडी, एउटै सरकारी कार्यालयको परिसरमा भेटिँदा के सोच्नु हुन्छ ? पक्कै पनि अनौठो मान्नु होला । बुधबार बाराको पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको कम्पाउन्डमा यस्तै अनौठो दृश्य देखियो । यो कानुनविपरीतको काम गरेका छन्, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका